Home About Us Our Services Our Portfolio
Creative Contents Creative Videos
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် Digital Marketing ဝန်ဆောင်မှုများကို တစ်နေရာတည်း အပြီးအစီး ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်သော မြန်မာ့ထိပ်သီး အေဂျင်စီဖြစ်ပါသည်။
⏺ Start Helping
သင့်ဆီ ပစ္စည်းရောင်းဖို့ ရောက်လာသူနဲ့ ကူညီဖို့ ရောက်လာသူ ဘယ်သူ့ကို သင်ပိုပြီး နှစ်သက်ပါသလဲ။
သင့် ကာစတမ်မာတွေလည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ လူတိုင်း ရောင်းနေတဲ့အချိန် သင်က ကူညီပါ။ ဝယ်ပါ၊ သုံးပါ၊ တရစပ်အော်ပြီး သူ့ထက်ငါ အပြိုင်ရောင်းနေတဲ့ကြားမှာ သင်က ကူညီဖို့ အသင့်ရှိနေပါစေ။
သင့်အမှတ်တံဆိပ်ကို ဝယ်သူတွေ ဘယ်လို သတိထားမိလဲ၊ ဘယ်လိုတွေ့ကြုံခံစားရလဲ၊ ဘယ်လိုအမြင်သက်ရောက်မှုတွေ ရှိလဲဆိုတာ ဈေးကွက်မှာ Positioning လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
What is Digital Marketing and How it works in Myanmar?
What is Digital Marketing and How it works in Myanmar? Myanmar နိုင်ငံရဲ့ လုပ်ငန်းရှင် ၁၀ ယောက်မှာ ၉ ယောက်က Digital Marketing လို့ဆိုတာနဲ့ Facebook မှာပေ့ချ်ထောင်၊ ပို့စ်တင်၊ ဘုစ်တွန်းတာကိုပဲ ပြေးမြင်တတ်ကြပါတယ်။ Startups 9/10 in Myanmar Logic: Digital Marketing = Facebook Marketing Digital Marketing = ပေ့ချ်ထောင်/ပို့စ်တင်/ဘုစ်တွန်း ဒီ ၁၀ ယောက်ရဲ့ ၉ယောက်ထဲမှာ မိတ်ဆွေ မပါဝင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကူညီပါရစေ။ ကိုယ်က သူတို့ထက် ပိုနားလည်ပြီး မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးချနိုင်တဲ့သူ ဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ။ ဒါကြောင့် ဒီပို့စ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ DigitalMarketing.com.mm ကနေပြီး ဒစ်ဂျစ်တယ်မာကတ်တင်း ဆိုတာဘာလဲ။ Myanmar နိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုအလုပ်ဖြစ်နေကြတာလဲ။ “ဂဃနဏ” သိရအောင် ပြောပြပေးသွားမှာကြောင့် အဆုံးထိဖတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ သင်တွေ့ဖူးသမျှထဲက အရိုးရှင်းဆုံးသော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက် Digital Marketing ။ ။ ဒစ်ဂျစ်တယ် စက်ပစ္စည်းသုံးပြီးတော့ ဝယ်သူရအောင် မာကတ်တင်းလုပ်ခြင်းကို Digital Marketing လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒစ်ဂျစ်တယ် စက်ပစ္စည်းတွေမှာ ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ တက်ဘလက်၊ တီဗီ၊ ရေဒီယို
Complete Digital Marketing Process in4Simple Steps ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် Digital Marketing လုပ်တော့မယ်၊ ဘယ်နေရာက စရမလဲ။ ဘာပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ ရှုပ်ထွေးနေသူတွေအတွက် Digital Marketing Process အစအဆုံးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းစဉ် (Process) ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားမလည်ဘူးဆိုရင် လုပ်ရတာ ပိုပြီးခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အစမှအဆုံး လုပ်ငန်းစဉ်တခုလုံးကို အဆင့်4ဆင့်နဲ့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပြောပြသွားမှာပါ။ ဒီ4ဆင့်ကို သိထားမယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းစဉ်တခုလုံးကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်သွားမှာကြောင့် လုပ်ရတာ ပိုပြီးလွယ်ကူမှာပါ။ Process Step 1: Find the Audience (Analytics and Research) ဘာမှမလုပ်ခင် အရင်ဆုံး စာရွက်နဲ့ဘောပင် ယူလိုက်ပါ။ သင်ဦးတည်ပြီး ဈေးရောင်းမယ့်သူတွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ သိသမျှ ချရေးပါ။ အသက်၊ လိင်၊ နေရပ်၊ ဝင်ငွေ၊ ဝါသနာ၊ အမူအကျင့်၊ စိတ်နေစိတ်ထား၊ အားလပ်ချိန်မှာ ဘာတွေလုပ်တတ်လဲ။ ဖုန်းသုံးပြီဆိုရင် ဘယ်နေရာမှာ အချိန်ကုန်နေတတ်ကြလဲ။ သူတို့ သင့်ဝန်ဆောင်မှု/ကုန်ပစ္စည်းကို လိုအပ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကဘာလဲ။ သူတို့မှာ သင်ကူညီပေးနိုင်တဲ့ ဘာပြဿနာတွေကို ခံစားနေရလဲ။ သ
How to Do Market Research in5Easy Steps သင်ဈေးရောင်းတဲ့ နေရာမှာ သင့်ပစ္စည်း/ဝန်ဆောင်မှုတွေ ရောင်းကောင်းဖို့ အရင်ဆုံး Market Research လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေများပြီး ကြော်ငြာတွေ ပြည့်ကျပ်နေတဲ့ နေရာမှာ တိုးပေါက်ဖို့ သင့်ကိုသတိထားမိဖို့ဆိုရင် ကုန်ပစ္စည်းပုံလေးတင်၊ ဈေးနှုန်းလေးတပ်၊ အကောင်းဆုံး အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း အပ်ကြောင်းထပ်အောင် ပြောနေရုံနဲ့ မရတော့ပါဘူး။ Myanmar ရေမြေနဲ့ကိုက်တဲ့ သူတို့တကယ်ကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာကို ကူညီဖြေရှင်းရမယ်၊ သူတို့အတွက် မက်လောက်စရာ အားသာချက်နဲ့ သင့်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုကို ပြသရပါမယ်။ ဒီအတွက် သူတို့အကြောင်းကို အသေးစိတ်လေ့လာဖို့ Digital Marketing Process ရဲ့ ပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ “Market Research” လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သင်ဦးတည်ရောင်းနေတဲ့ Myanmar ပြည်သားတွေရဲ့ ပြဿနာတွေ၊ ရည်မှန်းချက်တွေကို ဂဃနဏ နားလည်တော့မှ သူတို့ကို စကားပြောတဲ့နေရာ၊ မာကတ်တင်းလုပ်တဲ့နေရာ၊ ဆွဲဆောင်မှု၊ ထိရောက်မှုရှိတဲ့ ကြော်ငြာစာတွေ ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ အဆင်ပြေနိုင်မယ် မဟုတ်လားဗျာ။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ပို့စ်မှာ သင့်ရဲ့ ဝယ်သူတွေအကြောင်းကို ခေါင်းစခြေဆုံး သိရအောင် ဘယ်လိုလေ့လ
မြန်မာပြည်သားတွေ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စခရင်ရှေ့ကို ပိုရောက်လာတာနဲ့အမျှ Digital Marketing သုံးပြီး စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ကို လူပြောများလာကြပါတယ်။ ဒီတော့ Digital Marketing ကဘာလဲ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဘယ်လိုအလုပ်ဖြစ်နေလဲ။ တိုတိုတုတ်တုတ် ပြောရရင် အသေးစား လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ Digital Marketing ကို Facebook Advertising နဲ့ အထင်မှားနေကြတုန်းပါပဲ။ တကယ်တမ်း မြန်မာမှာ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးတာရယ်၊ လူတွေ အသိပညာ အားနည်းတာရယ်ကြောင့်သာ Facebook ကတအားအလုပ်ဖြစ်နေတာပါ။ လောလောဆယ်မှာတော့ တနေ့ထက်တနေ့ Digital Technology တွေ အားကောင်းလာတယ်၊ လူတွေလည်း နည်းနည်း မျက်စိကျယ်လာကြပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook တခုတည်းက အလုပ်ဖြစ်မယ်လို့ မဆိုနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် Facebook မှာ လုပ်ငန်းတိုင်းနီးပါး ငွေပြိုင်သုံးနေကြတာကြောင့် ပြိုင်ဆိုင်မှုများသလို အကုန်အကျလည်း များပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဒီလိုနေရာမှာ ပိုက်ဆံတွေပစ်ထည့်မယ့်အစား လက်ရှိမှာ သုံးစွဲသူတွေရှိလာပြီး နောက်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း လုပ်ငန်းတွေ ပြိုင်ဆိုင်မှုများလာတော့မယ့် နေရာတွေကို လေ့လာထားသင့်ပါပြီ။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ Article မှာ Facebook
သင့်လုပ်ငန်းအတွက် Website အပ်ပြီဆိုတဲ့အခါ Agency တွေက ဘာလုပ်ပေးမှာလဲ
Web Development Service ကို Agency တွေမှာ အလုပ်အပ်ပြီဆိုရင် သင့်ကို ဘာတွေ ဝန်ဆောင်မှုပေးမှာလဲ။ သင်ဘာပြန်ရနိုင်မှာလဲ။ အကြမ်းပျမ်းအားဖြင့် Website ရေးဆွဲခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အဆင့် 8 ဆင့် အထိပိုင်းခြားနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချက်ချင်းစီကိုလေ့လာလိုက်ရအောင်>>> Gather Information Web development ပိုင်းရဲ့ ပထဆုံးအပိုင်းလည်းဖြစ်သလို အရေးကြီးဆုံးအပိုင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင့် Business ရဲ့ အမျိုးအစား၊ Vision, Mission နဲ့ Marketing Objectives တွေကို အတိအကျ ရယူရပါမယ်။ သင့် Business အကြောင်းသိမှ ဘယ်လို Website အမျိုးအစား သုံးသင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ ဘယ်လို Website အမျိုးအစားတွေက Updated ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Plan Client Meeting ကရယူလာတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ SiteMap တစ်ခုရေးဆွဲသင့်ပါမယ်။ Site Map ဆိုတာကတော့ Website တစ်ခုလုံး ဘယ် Pages တွေပါမယ်နဲ့ ဘယ် Links တွေကနေ ဝင်မယ်ဆိုတာကို မြေပုံတစ်ခုပုံစံ ရေးဆွဲထားခြင်းပါ။ ပြီးရင်တော့ Website တစ်ခုရဲ့ ပုံစံအကြမ်းကို စာရွက်ပေါ်မှာ ရေးဆွဲထားရပါမယ်။ ထွက်လာတဲ့ ဒီဇိုင်းအကြမ်းနဲ့ Business Plan တွေကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လို